Aerolith, waa dhacdo dahsoon oo aan xal loo helin | Saadaasha Shabakadda
Dhacdooyin yaab leh iyo waxyaalo qarsoon oo aan la xallin. Dabeecadda, ama dabeecadda labadaba, ma joojinayso la yaabkeenna. Maanta waxaan ka hadleynaa arin abuurtay muran badan waqtigeedii oo sii ahaatay xujo aan xal loo helin. Waxay ku saabsan tahay aerorolite. Waa baraf aad u tiro badan oo cirka ka soo dhaca oo sababa xajmigiisa awgeed. Waxaa loogu magac daray ka dib waxay umuuqataa meteorite.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegaynaa waxyaalaha dahsoon ee aerolith-ka iyo waxa saynisku ka yiraahdo haddii ay tahay ifafaale dhab ah ama shey kaftan ah. Ma rabtaa inaad wax intaa ka badan ogaato?
1 Aerolito, dhacdo yaab leh
2 Asalka macquulka ah ee aerolith
3 Xaqiiq mise been?
4 Kiisaska Aerolith
Aerolito, dhacdo yaab leh
La soo food saartay xaalada dhicitaanka baraf waaweyn oo dahsoon, waxaa jira wax aan la garanayn sida ay asal u noqon karto. Haddii ay tahay isbeddelka cimilada ee leh isbeddelada ay ku hayso cimilada ayaa awood u leh inay sameysato baloogyadan barafka ah ee jooggoodu sarreeyo sababo la xiriira hoos u dhac degdeg ah oo heer kulka ah, haddii ay tahay biyo daadanaya diyaarad ganacsi marka loo eego isbeddelka kuleylka ee joogga si deg deg ah ayuu baraf ugu noqdaa, iwm.
Xitaa waxaa loo maleynayay inay tahay wax soo saar kaftan ah, haraaga majaajillada halabuur kale ama xitaa kuwa ka baxsan. Maxay cadahay waa su'aalaha ku saabsan asalka iyo sameynta aerolith-ka wali lama xalin. Waa inaad ku fekertaa madaxaaga oo aad ka faa'iideysataa sayniska. Dhacdadu waxay dhacday Janaayo 8, 2000. Sannadkaas dhammaadka adduunka ayaa la sii saadaaliyay (sida marar badan oo kale) waxaana isbeddelay cimilada, hirarka 100-mitir, heerarka badda oo sare u kacaya, iwm.
Marxaladda sanadka 2000 waxay niyad jab ku ridi kartaa dhammaan kuwa saadaaliya dhammaadka adduunka iyo, malaha, waxay ahayd wax soo saar kaftan ah. Dhacdo la yaab leh oo dhulka u horseedda inay soo saarto meteorites baraf dhab ah waxay umuuqan kartaa waalli waxayna dadka ku abuuri kartaa argagax sababtoo ah, runtii, dhamaadka adduunka ayaa soo socda.
Waxay ahayd dhacdo aad u kacsan laakiin orod ah. Waxay dhacday maalin kasta inta lagu gudajiro maalmaha soo socda laga bilaabo 8 Janaayo ilaa Janaayo 17 isla bishaas. In ka badan 50 kiis ayaa ka dhacay Spain oo dhan, badankooduna waxay ku saleysnaayeen Valencia. Si kastaba ha noqotee, warbixinno badan oo la sameeyay waxay ahaayeen khiyaamo iyo waxyaabo kaftan ah, taas oo soo jeedinaysa in ifafaalaha laftiisu sidoo kale yahay.
Asalka macquulka ah ee aerolith
Waxaan ku falanqeyneynaa aragtida ugu macquulsan aragtida abuuritaanka ama asalka suurtagalka ee aerolith. Midka koowaad waa in la falanqeeyo haddii ay soo saari karto saameynta isbedelka cimilada. Waa run isbeddelka cimilada, sida magaceeda ka muuqata, waxay soo saartaa saameyn lama filaan ah iyo isbeddel ku yimaada cimilada adduunka. Taas macnaheedu maaha in saameynta la soo saaray ay ka hor imaan karto sharciyada fiisigiska. Aerolith-ka ayaa ka soo horjeeda iyaga.
Marka roobdhagaxyaale ku abuurmo daruur dhexdeeda, waxaa soo saarta hawo biyo ah oo heerkulkeedu aad u hooseeyo iyadoo la siinayo cadaadiska hawo hooseeya ee jira daqiiqad cayiman. Daruuraha waxaa ku jira kareemadan barafka ah ee loo yaqaan 'amorphous baraf' ee ay sameeyeen isku-darka dhibcaha biyaha si ka dhakhso badan heerka caadiga ah, sidaas Kristantarrada caanka ah ee barafka leh qaab-dhismeedka laba-geesoodka ah ma laha waqti ay ku sameystaan.
Mar alla markii roobdhagaxyaale sammeeyo, waxay ku hoos dhacaan culeyskooda, sidaas darteedna, cabirkoodu aad uma weynaan karo. Qaar badan oo ka mid ah daadadka roobdhagaxyaale ayaa ka badan inta caadiga ah maxaa yeelay waxay sii wadaan inay quudiyaan dhibco biyo ah oo kale oo isku dhaca kuna soo biira markay daruurta ka soo dhacaan. Cabirka, markaa, hilaaca roob dhagaxyaale wuxuu kuxiranyahay qodobo ay kamid yihiin heerkulka hada jira, xaddiga uumiga biyaha ee deegaanka, joogga ay daruuraha joogaan iyo isbadalka ku dhaca cimilada jiritaanka hore.
Haddii roobdhagaxyaale soo dhacdo oo, marka laga yimaado, ay quudiso dhibco kale oo biyo ah, waxaa suurtagal ah inay waxoogaa ka weynaato markay dhacayaan, laakiin ma gaari karaan cabirro ka weyn kan kubbadda teniska. Si kastaba ha noqotee, aerolith waa wax weyn. Sida iska cad waa wax aan macquul aheyn inuu ku dhex abuurmo daruur, maadaama culeys aad u yar uu durba ka guuleysan lahaa iska caabbinta hawada oo uu soo dadajin lahaa saameynta culeyska. Inta ay quudato dhibco kale oo biyo ah oo cirka ka jira markay u soo dhacdo si ay u weyneyso cabirkiisa, waa wax aan macquul aheyn in waqti yar gudahood ay sameysato baraf cabirkiisu le’eg yahay.
Xaqiiq mise been?
Waxaas oo dhami waxay si xoog leh u soo jeedinayaan in aerolith-kan uu ka dhashay kaftan ay sameeyeen dad doonayay inay cabsi ku beeraan dadka ka dib imaatinka kunka kun iyo dhammaadka dunida ee suurtogalka ah. Haddaan meteorite ahaan lahaa Waa la falanqeyn karaa oo la barbardhigi karaa hadhaaga dhagaxa sheyga cirka ka mid ah. Waxaa qoray Dhinaca kale, shisheeyaha waxay lahaan lahaayeen wado kale oo ay uga digaan kuwa caqliga badan inta ay tuurayaan barafka oo kaliya ay diiradda saaraan jasiirad.
Marka la eego fikirka biyo daadinta diyaaradda ganacsiga, waa isku mid. Waa suurtagal in daadadka biyuhu ay ku dhacaan diyaaradaha, laakiin waa dhacdooyin aan caadi ahayn oo aan soo noqnoqod lahayn oo ku dhaca muddo gaaban gudaheeda oo aan wax badan laga ogaan. Haddii ay dhacdo inay sabab u noqon karto daadashada biyaha, waxay noqon kartaa kiiska, laakiin sinaba uma sameysan karto baraf cabbirkiisu le'eg yahay. Waxa ugu horeeya, markaad biyo daadato, waxay ku soo bixi laheyd diyaarad iyo xariiq. Xitaa haddii aan u maleyno in heerkulka joogga sare uu si weyn uga duwan yahay kan gudaha diyaaradda, xitaa haddii baraf uu sameysmayo, ma noqon doonaan kubbado ka weyn kubbadda teniska.
Sinnaba looguma keydin karo biyaha joog ahaan qaab wareegsan si ay awood ugu yeeshaan sameynta aerolith cabirkaas ah.
Kii ugu horreeyay wuxuu ku dhacay Soria 8-dii Janaayo 2000. Laba maalmood kadib, Seville aerolith ayaa afuufay daboolka Fiat Uno, halka milkiilihiisu kafee cabayay. Maalintii 12aad dhacdadan waxaa lagu soo celiyey bakhaar warshadeed oo ku yaal l'Alcúdia, 13kii Elx, 14kii La Unión (Murcia), 15kii Enguera iyo Xilxes, 6dii Cádiz iyo Huelva iyo 17th Algemesí.
Waxaas oo dhan waxay keeneen argagax iyo cabsi ah in hanti ama sharaf jir ahaaneed ay waxyeelo u geysato dhicitaanka barafkan. Kama socon kartid wadada si deggan adigoon ka baqayn inaad kor u eegto haddii ay dhacdo meel baraf ah oo madaxaaga ku soo dhacaya.
Sidaad u aragto, waxa noocan ah waxaa si fiican looga qaataa kaftan oo aan la saadaalin dhamaadka adduunka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Aerolite